Deris isu daran! Qormo Xiiso Leh Barkhad Kaariye | Saxil News Network
Deris isu daran! Qormo Xiiso Leh Barkhad Kaariye
Dhacdooyinka ugu qiimaha badan leh ee warbaahintu hadday ogaan lahayd ay tebin lahaayeen, una baahan in la weriyaa waxay ka dhex dhacaan laba cid isu-xiga, balse mar walba is-khilaafsan. Laba aan meel kala tagin, haddana hadday awoodi karayaan kala guuri lahaa, sababtoo ah waa kala doonis iyo kala dano! Midkood waxa xiiso geliya waxa kale u daran! Kanna waxa xiiso geliya waxaan qancin ka kale! Dan baa isku qasabtaye, salaantu ma dhex marteen! Mid waliba wuxuu aaminsan yahay in uu ka kale saxda uga dhaw yahay, waayo afcaashiisa ayuu u haystaa inay tahay ta wanaagsan.
Labadoodan mid waliba cid buu hadalkeeda maqlaa oo u hoggaansamaa, waa halka ay ka heshiin la’yihiin. Midkood wuxuu dhabarka ku hayaa oo gartiisa hor dhigaa oo u akhrida cid mar walba garta siisa, kuna tidhaahda “Adigaa saxsan, sababtoo ah xaqaad ku taagan tahay!” Waxase uu u diidaa in uu u sheego in cidday is-hayaan cidi ka dambayso. Markaas ayuu maqlaa oo uu u hoggaansamaa. Marka uu damco in uu yeelo taladii la-taliyihiisana, waxa u diida oo hortaagan deriskiisii ay isu darnaayeen! Ka kale waxa uu isna ka talo qaataa cid kale, balse farqigu waxa weeye ciddan kale isaga waxay u sheegtaa in mucaaradkiisa oo kaliya aanu cadowgiisa ahayne uu jiro mid ka dambeeya oo cadowgiisan soo dira! Waxa kale oo uu u sheegaa in cadowgaasi aanu kaliya cadow isaga ku ahayn’e uu labadoodan ba neceb yahay oo uu cadow ku yahay! Markaasuu gartaa in looga baahan yahay in uu guntida dhiisha isaga dhigo oo uu iska dhiciyo cadowga isku lammaan! Hadda, garo waa afar laba ba dhinac u wada socdaan!
Labadan dhinac ee is-hayaa hadda intooduba ma saxna ee dhinac ka mid ah ayaa talada cidda uu hoggaansamaa ay saxsan tahay oo xaqa ku taagan. Ka kale se wuxuu ku sugan yahay hallow, haddaanu maqlin dhinaca ay is-hayaan oo aanu colaadda iska daynna wuu sii lumayaa. Deriskan isu darani waa iimaanka iyo nafta! Cidday ka amar qaataan na waa Ilaahay iyo Shaydaan! Iimaanku xaqa ayuu ku sugan yahay, ilaahay baa hadeeyay oo uu ka amar qaataa, waxaanu Ilaahay u sheegay in nafta uu horjoogo, shaydaankuna yahay cadowgiisa iyo cadowga Ilaahay! Waxa la isku hayaanna waa nafta oo raaxda dhaldhalaalka adduunyo iyo doonisteeda, waxase haya oo xejiya iimaanka. Waa deris isu daran oo aan kala durkin. Ilaahayoow iimaanka noo xoogee, nafta na noo cabiidi! Aamiin.